Daawo Muuqaalka Sababtii Dhabta Ahayd Ee N’Golo Kante U Suurtogalisay In Laba Koob Oo Premier League Ah Uu Kula Guulaystay Leicester City Iyo Chelsea. – GOOL24.NET
Daawo Muuqaalka Sababtii Dhabta Ahayd Ee N’Golo Kante U Suurtogalisay In Laba Koob Oo Premier League Ah Uu Kula Guulaystay Leicester City Iyo Chelsea.
Xidiga xulka qaranka France iyo kooxda Chelsea ee N’Golo Kante ayaa ka mid ah ciyaartoyda faro ku tiriska ah ee waqti kooban ku sameeyay horumar taariikhi ah wuxuuna si deg deg ah ugu guulaystay laba koob oo Premier League ah iyo waliba koobka aduunka iyada oo waliba aanu dariiq dheer u soo marin.
Kooxda Leicester City ayaa sababta ugu horaysay ku lahayd in N’Golo Kante ay keentay horyaalka Premier league si uu taariikhdan deg dega ah ugu talaabsado laakiin waxaa jira muuqaal xusuus ah kaas oo uu Sky Sports News u adeegsaday Football Manager si uu jamaahiirta kubbada u xusuusiyo sababtii Kante horumarkan ku gaadhay.
Markii ay kooxda Leicester City ku dhawaaqday in ay la soo saxiixatay Kante oo ay kula soo wareegtay 5.6 milyan gini oo kaliya intii lagu jiray xagaagii 2015 kii oo muddo saddex sano ah laga joogo, waxaa jiray jamaahiir kubbada cagta ah oo aad u yar oo garanayay xidiga ka soo wareegay kooxda reer France ee Caen balse hadda caruurta yar yar ayaa ku heesaysa Kante.
Haddii aan intaa ku soo dhaafno xusuusta Kante, waxaa muuqaalka aanu halkan idiinku soo gudbinayno lagu qeexay sababta dhabta ah ee Kante ka caawisay in uu laba jeer ku guulaystay koobka Premier League isla markaana uu xataa uga sii gudbay koobka aduunka, waana bandhigii uu sameeyay kulan ay Leicester City ku qiimaysay xaaladiisa si ay ula soo wareegto.
Haddii ayna Leicester City la soo saxiixan lahayn waxaa la fahmi karaa in Kante aanu maanta joogeen dariiqa kooban ee uu soo maray, sidaa daraadeed, bandhigii uu sameeyay ee ka caawiyay in Leicester City ay la soo wareegto ayaa noqday xaqiiqda dhabta ah ee guushiisa kaantay taas oo aanu xogeeda halkan idiinku hayno.
Kante ayaa si layaableh iskaga iibiyay kooxda Leicester City intii lagu jiray kulan ay kooxdisiii Caen la ciyaartay Marseille wuxuuna sameeyay bandhig sabab ugu noqday guulaha uu gaadhay iyo hayaankii uu min Liecester, Chelsea ilaa xulka qarankiisa ugu soo gudbay.
Kulankaas sababta u noqday horumarka layaabka leh ee uu Kante sameeyay waxa xogtii loo diwaan galiyay ka mid ahayd, boqolkiiba 78% in uu dhamaystiray kubbad bixintii, in uu sameeyay 10 taakal oo 7 ka mid ahi guulaysteen.
Kante ayaa sidoo kale waxa kulankan dhexda ka qabtay 7 baas ama kubbadood oo kooxdiisa fursado loogu abuuri lahaa, waxa uu abuuray 3 fursadood oo goolal lagu dhalin karayay isaga oo waliba hal gool caawin sameeyay.
Kante ayaa sidoo kale sameeyay laba gambis oo guulaysatay laakiin waxa uu ahaa awooda iyo tamarta riixaysay ciyaartoyda kooxdiisa. Halkan ka daawo muuqaalka sababta u noqday in waqti kooban uu Kante horumar waali ah ku gaadho iyo kulankii Leicester City uu indhaha kaga xaday.